Enwere ike ịkọwapụta nkọwa nke Samsung S8 | Akụkọ akụrụngwa
Enwere ike ịkọwapụta nkọwa nke Samsung S8
N'agbanyeghị ọdịda na nkwụsị nke ahịa Note 7 pụtara maka ụlọ ọrụ Korea bụ Samsung, mgbe nsogbu ndị ọnụahịa ahụ na-enye na nke ụlọ ọrụ ahụ echebeghị ihu, Samsung gara n'ihu na-elekwasị anya na flagship ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ, Samsung Galaxy S8, ọnụ na a ga-ewepụta ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume puru iche na Mobile World Congress ọzọ a ga-eme na Barcelona na njedebe nke February. Ngwongwo ndi China nke Weibo aburula onye ozo nke ihe omuma banyere Samsung S8 ohuru.
Dị ka anyị nwere ike ịgụ, S8 ga-enwe nha ihuenyo abụọ: otu nke 5,1 na nke ọzọ nke 5,5 sentimita asatọ, ihe na-agaghị eju anya ebe ọ ga-abụ otu ihe ahụ dị ka ụdị nke gara aga, nwere ihu elu dị larịị na ihuenyo gbagọrọ agbagọ (Edge nlereanya). Banyere ndị nhazi ahụ, ọ dị ka ndị Korea ọzọ ga-eme ya malite ụdị abụọ dị iche iche n'ahịa, otu nwere Qualcomm Snapdragon 830 na nke ọzọ na Exynos 8895, Ọ bụ ezie na ọhụụ ndị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Samsung na-enye nsonaazụ dị mma karịa arụmọrụ na oriri.
Samsung ga - ejikwa Exynos processor ya na Europe, ma maka ụdị ahụ ga - abata na United States, ọ ga - ahọrọ iji Snapdragon 830. Banyere ihuenyo ahụ, ụfọdụ asịrị na - ekwu na ihe ngosi 5,5 nke anụ ọhịa nwere ike iwekota ihuenyo 4k, mgbe ụdị 5.1 ga-aga n'ihu na-echekwa mkpebi QHD dị ugbu a nke 1560 × 1440.
Banyere igwefoto, Samsung nwere ike ịhọrọ itinye igwe foto abụọ n'azụ na ọdụ ọhụrụ a, na-agbaso ejiji nke ndị na-emepụta ugbu a. Ọ bụrụ na Samsung na-aga n'ihu na-eme nke ọma na ese foto, ụdị ọhụụ a nwere ike ịbụ ezigbo mgbanwe n'ihe banyere ogo foto na-aghọ ngwaọrụ nwere igwefoto kachasị mma na ebe ahụ, yana ebe afọ abụọ gara aga ama ama igwefoto iPhone adaala. dị nso nke Samsung na-enye.
Banyere nchekwa, Samsung nwere ike itinye usoro UFS 2.1 flash na mgbakwunye iwebata n'ime usoro ihe niile onye inyeaka ọhụrụ ọ nwetara izu ole na ole gara aga, akpọrọ m Viv, onye nnyemaaka na dịka usoro teknụzụ kachasị mkpa si enye Siri otu puku ntụgharị na arụmọrụ na ịba uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Enwere ike ịkọwapụta nkọwa nke Samsung S8
Alberto Barrancos na-etinye ihe oyiyi dijo
Ọ ga-enwe ihe mgbanyụ ọkụ e nwetara n'ime ya?
Zaghachi Alberto Barrancos
Dika nyocha ohuru, Apple Watch bu ihe kachasi nma
Amazon, maka nchekwa, gbanwere paswọọdụ ọtụtụ puku ndị ahịa